NYI LYNN SECK 18+ DEN: Scenario 27-40
မဂဿငလာတောင်ညွန့် စက်ဆန်းက ပောက်ကွဲမှုဟာ ထူးခြားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ပြီးတော့ တခုခု လွဲနေတယ်လို့လည်း ခံစားရတယ်။ ပောက်ကွဲမှု ထူးခြားတာက တစ်မြို့လုံး တုန်သွားစေလို့ ဖြစ်ပာတယ်။ ဟိုးနှစ်အတှောကြာက ရန်ကုန်သုံးနေရာမှာ တချိန်တည်းနီးပား ဗုံးကွဲခဲ့တာတောင် ဒီလောက် မတုန်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ယမ်းစိမ်းဟာ အဲဒီလောက် ပြင်းထန်ရဲ့လား။ အဲဒာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာတိုင်း(မ်)က မီးသတ်သမားဟောင်းတစ်ဦး ရေးထားတာကတော့ ရေနဲ့ ထိတွေ့ ဓာတ်ပြုလို့ ဒီလောက်ထိ ပြင်းထန်စွာ ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ ဆိုပာတယ်။ ဒာဆိုရင်တော့ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အဲဒီမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဆေးအမယ်တွေအတိုင်း ပောင်းစပ်ပြီး ရေနဲ့ ဓာတ်ပြုကြည့်ရင်ဖြင့် ပောက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့ ဖောက်ခွဲရေးလက်နက်အသစ် တစ်မျိုးတောင် မြန်မာပြည်က ထုတ်နိုင်ဖို့ရာ ရှိပာမယ်။ ထားပာတော့။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာ မီးသတ်သမားတွေ သေခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကို အစိုးရက ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေပေးပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ စဉ်းစားမိတာတွေက (၁) သူတို့ သွားမီးသတ်တဲ့နေရာမှာ ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့မသိဘူးလား၊ မသိတာက ဂိုဒောင်တွေက ဘာတွေသိုလှောင်တယ်ဆိုတာ တရားဝင်မကြေညာလို့လား၊ မီးသတ်က အနဿတရာယ် အတိမ်အနက်ကို မသိဘဲ သွားခဲ့တာလား၊ အဲဒာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ။ (၂) ဓာတုပစဿစည်းတွေ မီးငြိမ်းသတ်တဲ့အခာ ဘာမှမဝတ်ဘဲ မီးငြှိမ်းသတ်ကြသလား၊ ဒာမှမဟုတ် မီးသတ်က အဲလိုမျိုးအတွက် အထူးဝတ်စုံတွေ မစီစဉ်ပေးဘူးလား။ (၃) အနဿတရာယ်ရှိတဲ့ ယမ်းစိမ်းတွေ၊ ဓာတုပစဿစည်းတွေ ဒီလို လူနေအိမ်တွေကြားမှာ ပော့ပော့လျော့လျော့ သိုလှောင်ထားတာကို ဒီအတိုင်းလက်ခံသလား။ (၄)မီးသတ်သမားတွေအတွက် အသက်အာမခံ မရှိတာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပာသလဲ။ (၅) တကယ်လို့ အဲဒီမှာ ဘာတွေ သိုလှောင်ထားတယ်ဆိုတာကို မီးသတ်က မသိလို့ သာမန်မီးသဘောနဲ့ မီးငြှိမ်းခဲ့ရတာဆိုရင် ပောက်ကွဲလို့ သေသွားရတဲ့သူတွေအတွက် တရားမစွဲသင့်ဘူးလား၊ တရားစွဲမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို စွဲရမလဲ(၆) ဒီဖြစ်စဉ်မှာ စတင်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ ဂိုဒောင်ပိုင်ရှင်ကိုပဲ အရေးယူတာတွေ့ရတယ်၊ တကယ်တမ်း အခုလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပောက်ကွဲ၊ ပျက်စီး၊ လူတွေသေခဲ့ကြရတာက ဂိုဒောင်အမှတ် (၇၉) ကြောင့် ဖြစ်ပာတယ်၊ ဒီဂိုဒောင်ကို ဘယ်သူပိုင်ပြီး သူ့ကိုရော အရေးမယူဘူးလား။ (၆) အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုမီးလောင်ရင် ဒီလိုပဲ မီးသတ်သမားတွေ ငြှိမ်းခဲ့ကြတာပဲ မီးသတ်သမားတွေကို အကောင်းမြင်တဲ့လူ သိပ်မတွေ့ဖူးဘူး၊ အခုလိုသေမှ အကောင်းမြင်ကြတာလား။ (၇)မီးသတ်သမားမီးသတ်၊ ဆရာဝန်ဆေးကု၊ စစ်သားစစ်တိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက် မီးသတ်သမားတွေ မီးသတ်တာ သူတို့အလုပ်ပာ။ အသက်ပေးပြီး မီးငြှိမ်းသတ်သွားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ စဉ်းစားစရာရှိပာတယ်။ ဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး ပောက်ကွဲနိုင်တယ်၊ အပိုင်းပိုင်းပြတ် သေနိုင်တယ်၊ အက်ဆစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ အကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝတ်စားပြီးကာမှ စွန့်လွှတ်စွန့်စား မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဒာဟာ တစ်မျိုးပော့။ တကယ်လို့များ သူတို့က ဂိုဒောင် မီးလောင်တာကို ရိုးရိုးမီးလို့ထင်ပြီး ငြှိမ်းသတ်ရင် ရုတ်တရက်ပောက်ကွဲလို့ မသိလိုက်ဘဲ သေသွားခဲ့တာ ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေး၊ ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်တွေ ဘာတွေဆိုပြီး နှစ်သိမ့်လိုက်တာက သိပ်ကို ကြီးကျယ်လွန်းရာ ကျပာတယ်။ အထက်က တာဝန်ရှိတဲ့ ကိစဿစတွေကို ပြန်စဉ်းစား စေချင်ပာတယ်။ (အာဇာနည်မီးသတ်သမားတွေကို စှောကားတယ်ဆိုပြီး မဆဲလိုက်ပာနဲ့ဦး၊ နောက်ကွယ်က အကြောင်းကို သေချာစဉ်းစားစေချင်တာပာ)
မနဿတလေးကနေ အုန်းချောတို့ဘာတို့ ကျှောပြီး ပြင်ဦးလွင်အတက် ၁၂မိုင် စခန်းမှာ အေးရှားဝော(လ်)ရဲ့ ယာဉ်ဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံတဲ့ တိုး(လ်)ဂိတ် တစ်ခုရှိတယ်။ မြန်မာပြည် ကျွန်တှော သွားခဲ့ဖူးသမျှ နေရာတွေထဲမှာ အကောက်ကျစ်ဆုံး ဂိတ်တစ်ခု ဖြစ်ပာတယ်။ တစ်တန်အထက် ကားဖြတ်သွားရင် ကျပ် ၆၀၀ ပေးဆောင်ရပာတယ်။ ပေးဆောင်ရတာက ပြသဿသနာ မဟုတ်ပာဘူး။ ပြသဿသနာက (၁) ပိုက်ဆံယူတယ် မတောင်းရင် ပြေစာ မပေးဘူး။ (၂) ပြေစာတောင်းလို့ ပေးရင် ကိုယ့်ကားဖြတ်တဲ့အချိန်က ပြေစာ မဟုတ်ဘူး၊ အသင့်လုပ်ထားတဲ့ ပြေစာတစ်စောင် ကောက်ပေးလိုက်တယ်။ (၃) အဲဒာကို ကွန်ပလိန်းလုပ်ရင် ပြေစာအသစ်တစ်စောင် ထပ်ထုတ်ပေးတယ်၊ ဒာပေမယ့် အချိန်တွေ ရက်စွဲတွေက တလွဲဖြစ်နေတယ်၊ ဖြစ်နေတာမှ နောင်လာမယ့် ၂၀၂၃ လို သကဿကရာဇ်နဲ့။ (၄) ဒီသုံးခုလောက် လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် အဲဒီက တာဝန်ကျနေတဲ့ လူဟာ တင်းတင်းမာမာ ဟောက်ပာတော့တယ်။ ကျွန်တှော အခာ ၁၀၀ ဖြတ်တယ်။ အခာ ၁၀၀ အဲလို ကြုံရတယ်။ သေချာတာက အဲဒီက ဝန်ထမ်းတွေ မသမာမှု လုပ်နေတာပာပဲ။ သူတို့ ဒီလို မသမာ လုပ်တဲ့အတွက် အေးရှားဝော(လ်) အနေနဲ့ ဝင်ငွေ အများကြီး ထိခိုက်တယ်။ အဲလို ထိခိုက်တဲ့အခာ ကုမဿပဏီအနေနဲ့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ပြန်ဝင်ငွေ မရဘူးဆိုပြီး လမ်းအသုံးပြုခ ထပ်တိုး ကောက်ခံမယ်။ အဲဒီအခာ ပြည်သူလူထုပဲ ခံရတာပာပဲ။ ကုမဿပဏီလည်း မမှားဘူး၊ ပြည်သူလူထုလည်း မမှားဘူး။ အဲဒီ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေ မှားနေကြတာ။ ဘယ်ကို တိုင်ရမှန်း မသိလို့ အခာခာ ဖြတ်တိုင်း အခာခာ မကျေမနပ် ဖြစ်နေရတာ ဘယ်တော့များမှ အမှန်အတိုင်း ဖြစ်လာပာ့မလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတင် မဟုတ်ပာဘူး။ ကုမဿပဏီဝန်ထမ်းတွေမှာလည်း ယုတ်မာတဲ့လူတွေ ရှိနေတတ်တာ သတိပြုဖို့ လိုပာလိမ့်မယ်။
ဦးသိန်းစိန်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကို သူ့ရုံးခန်းထဲ ချိတ်ပြီး ဒှောအောင်ဆန်စုကြည်နဲ့လည်း ပြေလည်မှုတွေရရော၊ တစ်ချိန်တုန်းက ဒှောအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နာမည်တောင် ထွက်ဖို့ မပြောနဲ့၊ သူ့အိမ်ရှေ့လမ်း (တကဿကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်) ဖြတ်ရင် နံပာတ် အမှတ်ခံရမှာစိုးလို့ ကားတောင် ဖြတ်မမောင်းရဲတဲ့လူတွေ အခုကျတော့ အမျိုးသားခောင်းဆောင်ကြီးသမီး ဘာညာနဲ့ ဘလိုင်းကြီး လိုင်းပြောင်းသွားကြတဲ့ သာကူးတွေကိုတွေ့ရတော့ အူလှိုက်သဲလှိုက် ရယ်ချင်မိသလို အန်လည်း အန်ချင်မိတယ်။
May I Help You ဆိုတာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်။ ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ် ဆိုတာလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပဲ။ ကျွန်တှောတို့အတွက်တော့ တစ်ခုမှ မမှန်ဘူး။ တစ်ရက်က ကျွန်တှောမောင်းလာတဲ့ ပာဂျဲရိုကားကို ဆူပာကာစတန် တစ်စီးက ဝင်တိုက်တယ်။ ည ၁၂ နာရီလောက်ကြီး။ ကျွန်တှောတို့ကားက တကယ်တော့ ဘာမှသိပ်မဖြစ်သွားပာဘူး။ သူ့ကားသာ အတှောထိသွားတာ။ ဒာပေမယ့် မောင်းတဲ့ကောင်က သောက်ချိုးမပြေလို့ ကားကိုပိတ်ရပ်ပြီး လှည်းတန်းက ရဲကို ခှောခိုင်းလိုက်တယ်။ ရဲကို သွားခှောနေတုန်းမှာပဲ အဲဒီကောင်က မောင်းပြီးထွက်ပြေးတယ်။ ကျွန်တှောလည်း အပှောက ဆောင်ပုဒ်နှစ်ခု အားကိုးပြီး လိုက်မသွားပာဘူး။ ခဏနေတော့ ယာဉ်ထိန်းရဲ အကဿငျီဘိုသီဘတ်သီနဲ့ ရောက်ချလာတယ်။ သူထင်တာကတော့ အကြီးအကျယ်ကားတိုက်လို့ သူ့လာခှောတယ်လို့ထင်တာ ဖြစ်ပာလိမ့်မယ်။ ဒီရောက်တော့ အတိုက်ခံရတဲ့ကားက ဘာမှမဖြစ်တော့ သိပ်စိတ်ပျက်သွားပုံ ရတယ်။ ဒီဟာက သူ့မှာတာဝန်မရှိဘူးတဲ့ ၅၁လမ်းရုံးကို သွားပာတဲ့။ ကျွန်တှော ထပ်မေးတယ်။ သေချာလားဆိုတော့။ စက်နဲ့တောင် လှမ်းပြောထားလိုက်ပြီတဲ့။ အိုကေ။ ဒာနဲ့ ကျွန်တှောတို့တွေ ၅၁လမ်းရုံးကို ချီတက်သွားကြတယ်။ ၁နာရီ ထိုးတော့မယ်။ ဟိုရောက်တော့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ အနားယူချိန်ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရုံးခန်းထဲ ဖရိုဖရဲနဲ့ ခြင်ထောင်ထောင်လို့ထောင်၊ နှိပ်တဲ့သူကနှိပ်နဲ့ ကျွန်တှောတို့က ဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြတယ်။ ကားတိုက်ခံရလို့ အမှုလာဖွင့်တာပော့။ အဲဒီမှာ ပြသဿသနာက စတာပဲ။ အမှုလက်ခံလို့ မရဘူးတဲ့။ နယ်မြေ(၂) (တကဿကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့ ကမဿဘာအေးဘုရားလမ်းထောင့်) အပိုင်ဖြစ်တာမို့ သူတို့ဆီ သွားတိုင်ပာတဲ့။ ဒာနဲ့ ကျွန်တှောက ဒာဆို ဘာလို့ လှည်းတန်းကရဲက ၅၁လမ်းရုံးကို လွှတ်ရသလဲလို့ မေးတော့ အဲဒီတာဝန်ကျ မသိလို့ပာတဲ့။ မသိတဲ့ကောင်ကို တာဝန်ချရလားဆိုပြီး ပြန်ပြောရာကနေ စကားများကြရော။ ကျွန်တှောတို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ရုံးထဲမှာ အတှောသောင်းကျန်း ပစ်လိုက်တယ်။ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီရုံးထဲက အရာရှိလိုလိုဘာလိုလို ကောင်တစ်ကောင် ထွက်လာပြီး ကျွန်တှောတို့ကို လာဟောက်သေးတယ်။ ကျွန်တှောတို့က သူ့ထက်ပိုပြီး ဆဲဆိုလိုက်တော့ လစ်ထွက်သွားရော။ ဒာနဲ့ မကျေနပ်လို့ နယ်မြေ(၂)ကို သွားတယ်။ အားလုံး အိပ်နေတယ်။ အတင်းပဲ တစ်ယောက်ကို နှိုးပြီး အမှုအပ်တော့ လက်ခံလို့ မရဘူးတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမှုစစ်အရာရှိ အမှုသွားစစ်နေလို့ဆိုပြီး အိပ်ချင်မူးတူး ပြောရှာတယ်။ ကောင်းပြီ ဘယ်နေရာမှာ အမှုစစ်နေသလဲဆိုတော့ ဒာကိုတော့ မပြောနိုင်ပာဘူးတဲ့။ မနက် ၉ နာရီလောက်မှ ပြန်လာပြီး အမှုအပ်ပာတဲ့။ သူ့အနေနဲ့တော့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ကျွန်တှောတို့ ငယ်ငယ်က စိတ်နဲ့ဆို အဲဒီတိုက်တဲ့ကားကကောင် အဲဒီနေရာမှာတင် မှောက်နေလောက်ပြီ။ ဒာဆို ကိုယ်လည်း ကျေနပ်သွားမယ်။ အခုတော့ ဒီအတိုင်း ဘလိုင်းကြီး လွှတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တှောတို့က အဲဒီအချိန် အရက်သောက်ထားကြတယ်။ အရက်သောက်ထားတဲ့သူတွေက ယာဉ်ထိန်းရုံးမှာသွားပြီး ဆဲဆိုတယ်ဆိုတာ ကြားလို့မှ မကောင်းပာဘူး။ ဖမ်းလို့တောင်ရတယ်။ ဒာ ကျွန်တှောတို့မှားတယ်။ ဒာပေမယ့် ကိုယ့်ထက်မှားနေတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာတော့ သူရင်းကိုယ်ရင်းပဲ။ အဲဒီကိစဿစအတွက်တော့ မှားတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ ယာဉ်ထိန်းရဲထဲမယ် တာဝန်အကျေပွန်ဆုံးနဲ့ အလုပ်အလုပ်ဆုံး၊ ဆက်ဆံရေး အကောင်းဆုံး ယာဉ်ထိန်းရဲဆိုလို့ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒီလူ အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေရင် ဘယ်တော့မှ လမ်းမပိတ်ဘူး။ တွေ့တဲ့လူတိုင်းကို အပြုံးနဲ့ ဆက်ဆံတတ်တယ်။ မိုးရွာရွာ နေပူပူ လမ်းမပှောမှာ ရှိနေတတ်တယ်။ သူ့ကို တွေ့ရတာ စိတ်တောင် ချမ်းသာသေးတယ်။ ဘောင်ဒရီလမ်းနဲ့ လင့်(ခ်)လမ်းထောင့်က ယာဉ်ထိန်းရဲပာ။ နာမည်လည်း မသိပာဘူး။ တစ်သက်လုံးမှာ ကောင်းတဲ့၊ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲဆိုလို့ သူတစ်ယောက်ထဲ မြင်ဖူးသေးတယ်။ ထားပာတော့။ သတိရလို့ မေအိုင်ဟဲ့ယူဆီ သွားကာမှ ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးလွတ်သွားတဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်အကြောင်း အဖြစ်အပျက်လေး ပြောမိတာပာ။ ကျွန်တှော့အိမ်က လက်ဝတ်လက်စားတွေ အထုတ်လိုက်ပျောက်လို့ ပြန်မရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဖမ်းလို့မရတဲ့ အိမ်ကကားနဲ့ တူနေတဲ့ ကားပုံတူတွေ စတဲ့ ကိစဿစတွေတော့ ပြောမနေ(ချင်)တော့ပာဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ အစိုးရလက်ထက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်က ၅၀၀၀ ကျပ် ရတယ်။ အခု ၂၀၁၁ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ကြီးချုပ်က ၅၀၀၀၀၀၀ ရတယ်။ အဆ တစ်ထောင် ကွာတယ်။ နှစ် ၆၀ လောက် အတွင်းမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလည်း အဲဒီ အဆလောက် မြင့်တက်ခဲ့မယ် ထင်မိတယ်။
ကားတင်သွင်းတဲ့ကိစဿစမှာ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းပာတယ်။ ဒာပေမယ့် အကောင်အထည် ဖှောတဲ့နေရာမှာတော့ တှောတှောလေး ကသောင်းကနင်း နိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ ခဏခဏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်း၊ ကန့်သတ်ချက်တွေကများနဲ့ လုပ်တတ်ရင် လူ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ကားကောင်းတွေကို ဈေးနဲနဲနဲ့ စီးနိုင်ပြီး၊ အစိုးရသစ်ကို ကျေးဇူးတွေ တင်နေရမယ့်ဟာကို နောက်ဆုံးတော့ ဂျပန်ကို အလုပ်အကျွေးပြုပြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေပဲ ကားသစ်တွေ စီးနိုင်တော့တာ တွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ အမိန့် မထွက်ခင် ကြိုတင်သိနေကြတဲ့၊ သတင်းဦးရကြတဲ့ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား သောက်ချိုးမပြေ ကိစဿစတွေကြောင့်လည်း ဆင်းရဲသား မလည်မဝယ်တဲ့သူတွေ လေးဘီးကားတစ်စီး ၁၅ သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းပြီး ရင်ခံခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ လူလည်တွေက သိတယ်။ ၂၀၀၂ မှောဒယ်ပဲ သွင်းရမယ်၊ ဘာအမျိုးအစားပဲ သွင်းရမယ် ကန့်သတ်ထားပေမယ့် ကန့်သတ်ချက် ချိုးဖောက်ပြီး မှောဒယ်မြင့်တွေ အသစ်တွေ သွင်းလာတယ်၊ ဒီမှ ခဏ သိမ်းဆည်းခံလိုက်တယ်၊ ပြီးလည်းပြီးရော ဟိုအဖွဲ့က ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီး ပြန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးရော။ အတိုင်အဖောက် ညီနေသလိုလို၊ လူလည်တွေကပဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို သိနေသလိုလို။ ပြီးတော့ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းတွေကို သံရည်ကျိုပစ်မတဲ့။ သံရည်တောင် ကျိုတော့မယ့် ယာဉ်တွေကို အလကား မယောင်ရာဆီလူး၊ ဟိုဒင်းထဲ သန်းရှာ အကောင်းပကတိ ရှိရမယ်ဆိုပြီး လုပ်ပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ လူတွေခမျာ မောင်းလို့မရတော့တဲ့ လေးဘီးကားတွေကို မရမကလိုက်ပြင်၊ အပ်တဲ့နေရာအထိ တခြားကားနဲ့ ဆွဲခှောပြီး အပိုအလုပ်တွေ လုပ်ရတော့တယ်။ မဟာဉာဏ်ကြီးရှင်တွေပာပဲ။
လေရူးသုန်သုန်မှာ ဘတ်တလာပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ လောကမှာ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သူတွေ ပြောရမလား၊ လူလည်တွေ ပြောရမလား၊ ဖျံတွေ ပြောရမလား၊ ကြိုးစားသူတွေ ပြောရမလား အကြီးအကျယ် ချမ်းသာနိုင်တာ အချိန်နှစ်ချိန် ရှိသတဲ့။ တိုင်းပြည်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ရယ် တိုင်းပြည်ပျက်တဲ့ အချိန်ရယ်တဲ့။ ကိုယ်မွေးလာခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ကနေ ခုအထိက တိုင်းပြည် တည်ထောင်နေတာလား၊ ပျက်နေတာလား ဘာလဲဆိုတာတောင် မတွေးချင်တော့ပာဘူး။ ဒာပေမယ့် အသိမိတ်ဆွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင် သိန်းပောင်းသောင်းချီ၊ သန်းပောင်းသောင်းချီ ချမ်းသာလာသူ အများကြီးကို တွေ့မိတယ်။
ရန်ကုန်မနဿတလေး လမ်းမသစ်ကြီး ဖောက်တယ်။ သိပ်ကောင်းတယ်၊ အချိန်တိုသွားတယ်။ ဒီလမ်းမကြီး ဖောက်တာ ဘယ်လောက်တော် ကုန်ကျမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့တောင် မရပာဘူး။ ဒာကို အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ကုမဿပဏီတွေကို BOT စနစ်နဲ့ ဖောက်ခိုင်းခဲ့တာ။ ကုမဿပဏီတွေကလည်း ဒီလောက် လမ်းမကြီးကို ၃ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ အားတက်သရော ဖောက်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတယ်။ ပြသဿသနာက လမ်းဖောက်ပြီး ၁ နှစ်လောက်ကြာတာနဲ့ စတာပာပဲ။ လမ်းတွေ အက်လာတယ်။ နိမ့်ဆင်းတယ်။ လှိုင်းတွေထလာတယ်။ အတွင်းနှုတ်ခမ်း အကာအရံတုံးတွေ ရေနဲ့ မျောကုန်တယ်။ အကွေ့တွေမှာ နည်းစနစ်တကျ မဖောက်ခဲ့တော့ ကားတွေ မှောက်ကြတယ်။ ဒီလမ်းဖောက်တဲ့အတွက် ကုမဿပဏီတွေ အစိုးရဆီက ပိုက်ဆံရမရတော့ မသိပာဘူး သေချာတာကတော့ တစ်ခုခုတော့ ရပာလိမ့်မယ်။ ဒာပေမယ့် အဲဒီအစိုးရက ပေးတဲ့ဟာ တစ်ခုခုဟာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပာပဲ။ အဲဒီကုမဿပဏီတွေ အကျိုးအမြတ် ရတယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့လည်း အဲဒီ ပမာဏနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ရလဒ်တစ်ခုကို ရသင့်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။ အခုဆို ဒီလမ်းမကြီးတွေ နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အတှောပျက်လာပာတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အလုပ်ပြီးတာမျိုး တစ်ခု မဟုတ်ဘဲနဲ့ အလုပ်ပြီးတဲ့နောက်က ကွာလတီကိုလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပာတယ်။ ဥပမာ- လမ်းလုပ်တယ်၊ ငားနှစ်အတွင်း ပျက်ခဲ့ရင် ဘယ်လို တာဝန်ယူပာတယ် ဆိုတာမျိုး ကုမဿပဏီတွေနဲ့ ပဋိဉာဉ် ချုပ်သင့်တယ်။ ဒီနေရာမှာ တာဝန်ယူတယ် ဆိုတာက ပြန်ပြင်တာကို ပြောတာမျိုး မဟုတ်ပာဘူး။ လမ်းပောက်လို့ဆိုပြီး လမ်းဘေးမှာ ကတဿတရာတိုင်ကီကို မီးနဲ့ရှို့ပြီး ဖာထေးတာမျိုး မဟုတ်ပာဘူး။ အရှင် ဇနကာဘိဝံသ တစ်သက်တာသံသရာ စာအုပ်မှာ ပြောသွားတဲ့စကား တစ်ခွန်း ရှိပာတယ်။ မိုးတွင်းမှာ တောင်သမန်ရေပြည့်လို့ ဦးပိန်တံတားကိုပဲ အားကိုးပြီး အမရပူရနဲ့ တောင်သမန်ရွာ စတဲ့ ရွာတွေက ဆက်သွယ်ကြရပာတယ်။ ဦးပိန်တံတားပျက်တော့ အစိုးရလမ်းဌာနက ပြင်တတ်ပာတယ် ဘယ်တော့မှ လုံးလုံးကောင်းသွားတယ် မရှိပာဘူးတဲ့။ ဘုန်းကြီးတောင် သိပာတယ်။ ကုမဿပဏီတွေ အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်ရတာကို လုံးဝ ဝန်တိုစိတ် မဖြစ်ပာဘူး။ အဲလို ကိုယ့်အတွက် အကျိုးအမြတ် ရသလို ပြည်သူတွေကိုလည်း ကောင်းတာလေးတွေ ပေးစေချင်တာ တစ်ခုပာပဲ။ ဒာနဲ့ စကားစပ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောတဲ့ အကြောင်းလေးလည်း သွားသတိရမိတယ်။ သူ့အဖေက ဂျီအီးကပာ။ သူတို့ ငယ်ငယ်က သူ့အဖေက ဆည်ဆောက်ဖို့ ပရောဂျတ်ကျလာပြီလို့ ပြောတဲ့နေ့များဆို တစ်မိသားစုလုံး ထခုန်တော့တာပဲတဲ့။
၂၀၀၉ လောက်က အဂဿငလန်ပာလီမန်ရဲ့ အထက်လွှတ်တှော အမတ်တစ်ယောက်က ဖိတ်ကြားလို့ ကျွန်တှောတို့ သွားခဲ့ရတယ်။ လန်ဒန်နာရီစင်ကြီးအောက်က သူတို့ရဲ့ ပာလီမန်အဆောက်အဦးကြီး ထဲမှာလည်း ညစာစားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံပောင်းစုံက လူတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ခွင့် ရခဲ့တယ်။ Debatewise က လုပ်တာဆိုတော Debate ဆန်ဆန် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ပွဲလည်း ဖြစ်ပာတယ်။ အဲဒီမှာ လေ့လာရင်း ဘာ အမြတ်တစ်ခု ရခဲ့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ်က အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကန့်ကွက်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Agenda တစ်ခု တင်မယ်ဆိုရင် Solution ကိုလည်း စဉ်းစားထားရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ အဲဒီဟာကို စိတ်ထဲစွဲလာလိုက်တာ မြစ်ဆုံကိစဿစ ဖြစ်တဲ့အထိပာပဲ။ အဲဒီမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ခွဲထားပာတယ်။ တစ်ပိုင်းက အစိုးရပိုင်း၊ တစ်ပိုင်းက ပြည်သူလူထုပိုင်း။ မြစ်ဆုံ ကိစဿစမှာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုဟာ လေးစားဖို့ ကောင်းပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ချီးကျူးဖို့အထိတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တှော့အနေနဲ့ ထင်မိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အရင်အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဒီကိစဿစကို စခဲ့တုန်းကလည်း သူတို့တွေပာခဲ့မှာပဲ။ အဲဒီတုန်း ကတည်းက ဒီလို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အခုလက်ရှိ အာဏာရလူတွေအားလုံး ဘာလို့ မကန့်ကွက်ခဲ့ကြသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တစ်ယောက်တည်းရဲ့ သဘောအတိုင်း လုပ်ခဲ့ရတာလို့ ပြောရင်လည်း ယောမင်းကြီး ရင်ကော့ခံတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြန်ဖတ်စေချင်မိသေးတယ်။ ထားပာတော့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ် ပြည်သူတွေ ဘာမှ မကန့်ကွက်နဲ့ ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးဆိုတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြီး ဆိုတဲ့ Agenda အတွက် Solution က ကန့်ကွက်ချင်သလောက် ကန့်ကွက် ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပာလိမ့်မယ်။ (လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့ တရားဝင် အင်တာဗျူးတွေ ကြေညာချက်တွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပာ)။ အခုလို အစိုးရသစ် ဖြစ်လာတော့ ပြည်သူလူထုက ကန့်ကွက်ကြပြီ။ ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေ ကူးပြောင်းမယ်ဆိုပြီး ကတိကဝတ်တွေက ရှိထားလေတော့ အဲဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးမှာ ပြသဿသနာ စတော့တာပာပဲ။ လုပ်မယ်ဆိုပြီး သဘောတူထားတဲ့သူကလည်း တစ်သက်လုံး မြန်မာကို ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး ဂုတ်သွေးစုပ်လာခဲ့တဲ့ တရုတ်။ အဲဒီလို ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်နေချိန်မှာ Solution အသစ်တစ်ခုကို သဘောထားကြီးကြီး ပုံစံနဲ့ ချပြလိုက်တယ်။ ဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာ ဒီစီမံကိန်းကို ရပ်ထားပာမယ်ပော့။ တစ်နိုင်ငံလုံးလိုလိုက အုတ်အှောသောင်းနင်း ကောင်းချီးပေးကြတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ မပာ။ အစိုးရသက်တမ်းဟာ ၅ နှစ်ပဲ ရှိတယ်။ အခုဆို တရုတ်နဲ့ညှိပြီး ပြီးပြီးရော ရပ်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်နှခုနှစ်ကြရင် ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခန်းဆီးနောက်ကွယ်က သဘောတူညီချက်မျိုးတွေ ရှိမနေနိုင်ဘူးလား။ နောင်သက်တမ်းမှာ တက်လာမယ့် အစိုးရတွေ ရှင်းပေတော့ ပြသဿသနာ။ ဒာကတစ်ခု။ နောက်တစ်ခုက ဒီလိုမျိုး အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ သဘောတူထားတဲ့ ပရောဂျတ်တွေ အများကြီးပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်ဆို မူးချစ်သူများ၊ သံလွင်ကာကွယ်သူများအဖွဲ့၊ ချင်းတွင်းတှောလှန်ရေး၊ စစ်တောင်းကယ်ဆယ်ရေး စတဲ့စတဲ့ အဖွဲ့တွေကို မြင်လာဖို့ရာပဲ ရှိပာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အရင်အစိုးရရဲ့ အဂျန်ဒာအဟောင်းတွေအတွက် အစိုးရသစ်က (များသောအားဖြင့် အရင်လူတွေပာပဲ) ဘယ်လို စလူးရှင်းအသစ်တွေ ပေးဦးမလဲဆိုတာကို တွက်နေမိတယ်။ ဒာက အစိုးရပိုင်း။ ပြည်သူလူထုပိုင်းကရော? ဒီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ကန့်ကွက်ပွဲကြီးကနေ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဒှောအောင်ဆန်းစုကြည်ကတောင် ပြောခဲ့တယ်။ အမှန်ပဲ တစ်နိုင်ငံလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တှောနဲ့သိတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုဆို အကဿငျီတွေ အများကြီးရိုက်၊ နယ်တွေမှာ အစည်းအဝေးတွေလုပ် တစ်နိုင်ငံလုံးကို လှုံ့ဆှောဖို့အထိတောင် သူတို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ တစ်ရက်က ကျွန်တှော ဘီယာသောက်နေတုန်း အဲဒီကိစဿစ ပြောဖြစ်ကြတော့ သူတို့က သူတို့လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြောပြနေတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တှောက တကယ်လို့များ သမဿမတက အဲဒီကိစဿစကို ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ ဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ မေးမိတယ်။ တှောတှောများများက ဒီဟာကို အစိုးရက မဖြစ်မနေ ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားကြတာ၊ အဲလို ထင်အောင်လည်း တာဝန်အရှိဆုံးလူတွေကတောင် သတင်းစာတွေကနေ ဂျာနယ်တွေကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်သေးတာကိုး။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆနဿဒ မပာဘဲနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ပရောဂျတ်၊ နိုင်ငံတှောရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူနေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပရောဂျတ် မှန်သမျှကို ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ကန့်ကွက်ကြမယ်ပော့။ ဒီနေရာမှာ ဒီကိစဿစကလည်း နိုင်ငံရေးအရကြည့်ရင် သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးကြီး တစ်ရပ်လို့ မြင်မိတယ်။ ဒီတော့ ရပ်ခဲ့ရင်လည်းအမြတ်၊ မရပ်ခဲ့ရင်လည်း နိုင်ငံရေးအရတော့ အမြတ်ချည်းပဲ။ အဲလိုအချိန်မှာ နောက်တစ်နေ့ အံ့အားသင့်စွာပဲ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခေတဿတရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက် ထွက်လာခဲ့တယ်။ တကယ်ပဲ ပြည်သူတွေ အောင်ပွဲခံပြီလား။ စဉ်းစားမိတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ မြစ်ကြီးတွေတိုင်းမှာ အဲလို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေ လုပ်ဖို့ဆိုပြီး သဘောတူထားတာတွေ ရှိတယ်။ မြစ်ဆုံပြီးသွားရင်လည်း အဲဒီဟာတွေကို ဆက်ပြီး ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြရမှာပဲ။ ကချင်မှာတော့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ရှမ်းပြည်မှာတော့ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရှမ်းပြည်က ဘယ်ခံပာ့မလဲ။ ဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းတွေကလည်း ဘယ်လက်ခံနိုင်ပာ့မလဲ။ ဒာဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပာတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒာက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရမ်းလိုနေပြီ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့က ထုတ်မယ်ပြောတယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေကလည်း ရောင်းပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။ ကျောက်မီးသွေးကနေ ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့တွေက ကန့်ကွက်ကြမှာ အမှန်ပဲ။ အနုမြူကနေ ထုတ်မလား။ နည်းပညာပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ လိုအပ်မှုတွေ ရှိနိုင်မယ်။ ဒီတော့ လိုအပ်နေတဲ့လျှပ်စစ်ကို ဘယ်ကနေထုတ်မလဲ။ တကယ်တမ်း မြန်မာပြည်မှာ ဆည်မြောင်းတွေ ရေအားလျှပ်စစ်တွေ လုပ်တာ များလှပြီ။ ကုန်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံဆိုတာလည်း သောက်သောက်လဲ။ ဆည်မြောင်း၊ ဂျီအီး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ထောက်ပို့ကလူတွေပဲ ချမ်းသာသွားကြတယ်။ လျှပ်စစ်က လိုသလောက် ထွက်လာတယ်လို့ကို မရှိဘူး။ စက်တွေပျက်ရတာနဲ့၊ ရေမလောက်တာနဲ့၊ ဘာဖြစ်တာနဲ့၊ ညာဖြစ်တာနဲ့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံလို့။ ခံနေရတာက ပြည်သူလူထု။ ဒာတွေလုပ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသဿသနာပောင်းစုံကိုလည်း မသိတာမဟုတ်ဘူး။ သိရက်နဲ့ ဆက်လုပ်ခဲ့ကြတာ။ အဲဒီအတွက် ပြည်သူလူထုက ကန့်ကွက်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကန့်ကွက်တယ်။ ဒာဟာမှန်တယ်။ ဒာပေမယ့် လိုနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြသဿသနာကို ဘာနဲ့ ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့ Solution ကို ဘယ်သူကမှ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ မပေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီ Solution ဆိုတာ အစိုးရက မြင်တဲ့၊ လုပ်တဲ့ Solution ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပာဘူး။ ကိုယ်သာ အစိုးရဆိုရင် ဒီလိုပြသဿသနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ Solution ပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ (တကယ်တော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စလူးရှင်းကို စဉ်းစားစရာ မလိုပာဘူး။ ဒာက အစိုးရကိစဿစပဲလို့ တွေးစရာ ရှိပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ဒီပြည်သူတွေကနေ နောင်တစ်ချိန် အစိုးရဖြစ်လာမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်တာမို့ ဒီစလူးရှင်းကို စဉ်းစားကြည့်တာပာ) ကျွန်တှော့အတွေးထဲမှာတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းမှုဟာ အစိုးရရဲ့ လှပတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုလို့ မြင်မိတယ်။ တကယ်တမ်း ဒာတွေက ဟိုတုန်းကတည်းက လုပ်ကို မလုပ်ခဲ့သင့်တာ။ ကိုယ့်ပြည်သူတွေ အကြောင်းကိုလည်း သိခဲ့သင့်တာ နားထောင်ခဲ့သင့်တာ။ အခုမှ အရင်ကတည်းက မလုပ်ခဲ့သင့်တဲ့ အလုပ်တွေကို လိုက်ပိတ်သိမ်းတာမျိုးကတော့ ကျွန်တှော့အနေနဲ့ဆို ချီးကျူးတာမျိုးထက် ပိုပြီး မချီးကျူးချင်ပာဘူး။ ကျေးဇူးလည်း မတင်နိုင်ပာဘူး။ အစိုးရသစ်အတွက်ကတော့ နာမည်ကောင်းတွေ တက်စေတာပော့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်နေသေးတဲ့ဟာတွေကို အခုအစိုးရ၊ နောင်အစိုးရ၊ အခုပြည်သူ၊ နောင်ပြည်သူ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။
လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် ၁သိန်းကို အခွန်တစ်သိန်းခွဲ ဆောင်ခိုင်းရင် မြန်မာငွေ သန်းတစ်သောင်းခွဲ၊ ဒှောလာ ဆယ်သန်း။ MSW လို ကားစုတ်မျိုးကို ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းတောင် သိန်း ၅၀၀ လောက်နဲ့ ရောင်းခဲ့တော့ အစီး ၁၀၀၀ ပဲရောင်းရဦးတော့ မြန်မာငွေ သန်းငားသောင်း၊ ဒှောလာသန်းငားဆယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးကို ၁၅သိန်းနဲ့ အလုံးတစ်သိန်းပဲရောင်း၊ မြန်မာငွေ သန်းတစ်သိန်းခွဲ၊ ဒှောလာသန်း ၁၅၀။ ချယ်ရီလိုကားမျိုးကို ဒှောလာ ၅၀၀၀ လောက်နဲ့ ရောင်းနေတာမျိုး ထည့်တွက်မနေတော့ပာဘူး။ အစိုးရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံရှာရတာ လွယ်လိုက်တာ။
ကိုရီးယားတွေများတွေ ရုပ်ရှင်ထဲကြည့်၊ သီချင်းတွေနားထောင်တော့ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ သို့ပေသိ တကယ်တမ်း အပြင်မှာ ဆက်ဆံရတော့ သောက်တလွဲ။ သွပ်ချာပာဒ အဂဿငလိပ်လိုပြောနေရင်း မြန်မာလိုညှပ်ပြော၊ နှစ်ခုစလုံး မပြောတတ်တော့ရင် ကိုရီးယားလိုတွေပြော။ လည်လိုက်တာလည်း မပြောနဲ့တော့။ စီးပွားရေးအကွက်မြင်တယ် ပြောရမလား။ ပန်းလှိုင်လိုနေရာမျိုးမှာ အိမ်လေးအိမ်လောက် ဝယ်လိုက်တယ်။ အိမ်တစ်အိမ်ဝယ်ရင် အခမဲ့ ဂောက်ရိုက်ခွင့်ကဒ်က လေးကဒ်ဆိုလား ရတယ်။ ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ အဲဒီကဒ်တွေကို လေးပုံသုံးပုံဈေးလောက်နဲ့ ပြန်ငှားစားတယ်။ ကိုရီးယားကနေ မြန်မာပြည် အသွားအပြန်လုပ် ဂောက်ရိုက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ကိုရီးယားမှာ ရိုက်တာထက် ပိုသက်သာသတဲ့။ ပန်းလှိုင်ကလည်း ကမဿဘာ့အဆင့်မီကွင်းဆိုတော့ ရိုက်ရတာ တန်တာပော့။ မြန်မာပြည်ကိုလည်း အလည်လာရ၊ ဂောက်လည်းရိုက်ရ၊ စီးပွားရေးလည်း လုပ်လိုက်သေး၊ နောက်ဆုံး အတွင်းရေးမှူးမလေးတွေတောင် ထားလိုက်သေးတယ်။ ပြုစုဖို့တဲ့။
မနဿတလေးက တရုတ်သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တှော့ကို ပြောကြတာ ရှိတယ်။ သူတို့လို မြန်မာပြည်ပောက် တရုတ်တွေကို FRC သာ ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုဘူးပော့။ တကယ်တမ်းဆို သူတို့ဒီရောက်နေတာ လေးဆက်လောက် ရှိပြီပော့။ ထိုင်းမှာဆို သူတို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်ပော့။ သူတို့ကို နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက် သူတို့ကလည်း တရုတ်ပြည်နဲ့သာ အများဆုံး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက် ငွေမည်းတွေ အများကြီး ယိုစီးရတယ်ပော့။ အများကြီးပဲ။ ဒာနဲ့ ကျွန်တှောကလည်း တစ်ခုတော့ ထောက်ပြလိုက်ပာတယ်။ ခေတ်ကာလ တစ်လျောက်လုံး သူ့ကျွန်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်၊ ကိုလိုနီခေတ်အချိန်၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းချိန်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ပထစ၊ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ ကနေ အခုကာလအထိ ထင်ရှားတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် မြန်မာပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့လူ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း၊ တှောလှန်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ခဲ့တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ခဲ့ဖူးသလဲလို့။ ဒီလိုပြောတဲ့အခာ သူတို့ အင်မတန် နားခားပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ကုလားအနွယ်ထဲကဆို ဦးရာဇတ်တို့၊ ဦးရာရှစ်တို့၊ ဂိုရှယ်တို့၊ ဗိုလ်မှူးဘရှင်တို့၊ ကျားဘညိမ်းတို့ စသည်စသည်ဖြင့် နာမည်တပ် ပြောလို့ရတဲ့သူ အတှောများတယ်။ တရုတ်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြမလဲ။ ရှိရင်တောင် အတှော လက်ချိုးရေရမယ်။ Who’s Who in Burma စာအုပ်ထဲမှာတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေ အများကြီးပာပာတယ်။ ဒာပေမယ့် အားလုံးက စီးပွားရေးသမားတွေပာပဲ။ မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ် သူတို့တွေများတယ်။ နီးစပ်ရာဓားနဲ့ပောင်းတယ်။ စီးပွားပျက်မခံဘူး။ ထားတော့။ ဒာကြောင့် မြန်မာပြည်အတွက် (မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လို့ မဆိုလိုပာ) အကျိုးပြုမယ်ဆိုတဲ့ တရုတ်တွေရှိလာမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အင်မတန်ဝမ်းသာမိမှာပာပဲ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကျွန်တှော မကြိုက်ဆုံးကိစဿစက ဧည့်စာရင်းဆိုတဲ့ ကိစဿစပာပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်နေပြီး အဲဒီလူတွေကို သတင်းပို့နေရတယ်။ ပြီးရင် အချိန်မတှော လာလာစစ်သေးတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တယ်ဆိုတာ လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီး နာမည်တပ်ထားပေမယ့် လာစစ်တိုင်း ဖဲဝိုင်းကို ရဲဝင်ဖမ်းသလိုပာပဲ။ ကျွန်တှောရောက်ဖူးသမျှ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘာမှမစစ်ဆေးဘူး။ ဒာဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေက လုံခြုံရေးကို အလေးမထားလို့လား လို့တောင် ထင်စရာရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုကို အနှောက်အယှက် မပေးဘဲ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရမယ့် ကိစဿစက သူတို့ကိစဿစပဲလေ။ ဒာမှမဟုတ်ရင် အာဏာမယူထားနဲ့ပော့။ အခုတော့ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာသွား ညအိပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ကို သံတှောဦးတင်ရသေးတယ်။ သံတှောဦးတင်ခက ပေးရသေးတယ်။ ဧည့်စာရင်းမတိုင်လို့ အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတဲ့ အမှုမျိုးဆိုတာ ရဲတွေအတွက်တော့ စားခွက်ကြီးတစ်ခု ဖွင့်ပေးထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှာမဆို သွားချင်ရာသွား နေချင်ရာနေပြီး မပူမပင် မကြောင့်မကျ အိပ်ရတဲ့ နေ့ရက်မျိုးတွေကို ကိုယ်လည်း ခံစားချင်သလို လူတိုင်းကိုလည်း ခံစားစေချင်တယ်။
ခုတလော ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းကိစဿစ အတှော ဂယက်ရိုက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာတောင် ဖြစ်နိုင်သေးရင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ လို့ပဲ ဆိုချင်ပာတယ်။ ဒီနေရာမှာ သိပ်နားမလည်နိုင်တဲ့ ကိစဿစတစ်ခုကို ပြောချင်သေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မယ် ဖုန်းစနစ်တွေ မျိုးစုံ ဖြစ်နေကြတဲ့ကိစဿစ။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် ဘာတစ်ခုမှလည်း မကောင်းဘူး။ အကောင်းဆုံး ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိပြန်ဘူး။ တချို့ဖုန်းက တောတွေတောင်တွေထဲ မိတယ်။ တချို့ဖုန်းက မြို့ထဲတဝိုက် မိတယ်။ CDMA, GSM တောင် ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ လှိုင်းတိုလှိုင်းရှည်တွေ ကွာသေးတယ်။ အရင်ချပေးထားတဲ့ ဖုန်းတွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက် အသစ်လဲပေးလိုက်။ ဟိုဟာက ပိုကောင်းတယ် ပြောလိုက်၊ ဒီဟာက ပိုကောင်းတယ်ပြောလိုက်နဲ့။ ဘာတွေမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ တချို့လူတွေဆို အမျိုးအစားမတူတဲ့ ဖုန်းသုံးလေးလုံးလောက် ကိုင်ပြီး ခရီးထွက်ကြရတယ်။ တစ်လုံးမမိ တစ်လုံးမိဆိုပြီးတော့။ ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ဟိုဖုန်းလိုင်းကတော့ အင်တာနက်ရတယ်၊ ဒီဖုန်းလိုင်းဆိုရင်တော့ အင်တာနက် မရဘူး အဲလိုကလည်း ကွာသေးသတဲ့။ တစ်ခာသုံးကဒ် ဆိုတာလည်း မိုးကျရွှေကိုယ်လို ပှောလာသေးတယ် ခဏပဲ ပြီးတော့လည်း ဖျက်ပစ်လိုက်ပြန်ရော။ အဲဒီအထဲ သောက်သုံးမကျတဲ့ ဟွဝေတို့ ဇက်တီအီးတို့လို ဖုန်းတွေက အခွင့်ကောင်းယူပြီး မတန်တဆဈေးနဲ့ လာရောင်းသေးတယ်။ ရောင်းတဲ့ဈေးကလည်း အိုင်ဖုန်းနဲ့ နင်လားငာလား။ စဉ်းစားကြည့်တော့ တကယ့်ကို ပြည်သူတွေကို အပိုင်ရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးတွေပာပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်အတွက် ဝင်ငွေအရှာပေးနိုင်ဆုံး ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာရင်းစစ်စရာတောင် မလိုပာဘူး။ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် သိလောက်ပာတယ်။ အဲ အသိတွေများတဲ့အတွက် မုဒိတာ ပွားကြည့်နေပာတယ် ဆိုတာလေးတော့ ထည့်ဖတ်ပေးကြပာဦး။
မှတ်ချက်။ ကိုယ်တွေးမိတာ၊ ကိုယ်ခံစားရတာ၊ ကိုယ်ထင်တာတွေ ကိုယ်ရေးပာတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ သဘောထားညှိဖို့ မဟုတ်သလို စည်းရုံးဖို့လည်း မဟုတ်ပာ။
Posted by NLS at 1/18/2012 12:59:00 AM
25 Responses to “Scenario 27-40”
ပျောက်နေတာကြာလို့ သတိရနေတာ။ ပြန်ပေါ်လာလို့ ၀မ်းသာပါ၏။
ကိုဇာနည် ရေးတော့မှ မြန်မာပြည်ရဲ့ဗဟုတ်ရုတ်ခတွေကို ကွက်ကွက်ကင်းကင်း မြင်ရတော့တယ်..စာတွေ ပြန်ရေးတာ ဝမ်းသာတယ်..ဖတ်ဖို့ရယ်ဒီ..
ဘလော့ကို ဆက်ပြီး ရေးစေချင်ပါတယ်...
welcome back and really happy to see you again...
Good post, Ko Nyi Lynn Seck.
Totally agree with your view at every scenario!
အမှန်တွေ . . .အမှန်တွေ. . .
MgHla Mandalay said...
ညီလင်းဆက် မျိုသိပ်ထားတာကြာလို့ ထင်ပါရဲ့ အန်ဖက်တွေ တော်တော်များတယ်...
ဖတ်ရမှာတွေများတာရယ်၊ Myanmar3မရှိတာရယ်ကြောင့် အိမ်ရောက်မှပဲ အသေအချာ ထိုင်ဖတ်တော့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပထမရေးထားတဲ့ ၂ပိုစ့်ကို သဘောကျတယ်။ ကျွန်မလဲ အဲဒီ့ဆုပေးတာကို ကောင်းလား၊ မကောင်းလား မရေမရာ ဖြစ်နေတာ။
Phyu Ei Thein said...
It's beenalong time. I am so glad to read your posts. Reality!
love it bro, welcome back :)
အကို့ရင်ဘတ်ထဲက အမှန်တရားတွေ ပေါက်ထွက်လာတယ်...။ ။။
နိူင်ငံတကာမှာအမြန်လမ်းမကြီးကလွဲရင်မပေးရပါ။ မြို့ ၀င်ကြေးမပေးရပါ။
နှစ်စဉ်ကြေး(ဘီးခွန်) လုံလောက်စွာကောက်ထားခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းနိုင်ငံတကာနည်းတူကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
အမယ် ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်းဟ... ရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လား နည်းနည်းပါးပါးလည်း ရှိမရှိကိုပြောပါဦး။
absolutely love ur writing.
scenario38..အဲလို ပြန်ပြောလိုက်သလား..ကောင်းလှောင့်တေး..Scenario39..အမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ထဲက သိမ်ဇရပ်မှာနေခဲ့တာ..ရန်ကုန်ကလာလည်တဲ့ ဦးလေး ၂ယောက် ဧည့်စာရင်းမတိုင်မိလို့ ပေါ်တာဆွဲခံရလို့ အမတို့အမေ မျက်ရည်တရွှွှဲရွှဲ ဖြစ်ခဲ့တာသတိပြန်ရမိတယ်.
အခုနေပြည်တော် ၀န်ထမ်းအိမ်ယာတွေမှာတောင် ဧည့်စာရင်းမတိုင်မိလို့ ၀န်ထမ်းရဲ့တူတွေ ထောင်ထဲ ၂ ပတ်လောက်သွားနေလိုက်ရတာ ကြားရတယ်...မြန်မာရဲ့နာတာရှည်ရောဂါ ထင်ပါရဲ့..
ကျွန်တော် ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ စာတွေ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ၊ google earth မှတ်ချက်.. စတာတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄နှစ်လောက်ကတဲက ဖတ်ဖြစ်လာရင်း စိတ်ထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး လေးစားမိနေတာ..ဒီကြားထဲပျောက်နေပြီး ခုလိုပြန်ဖတ်ရတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတော်တယ်ဗျာ။ စာတွေအားလုံးလိုလို ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါမှ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ဘူး။ ဒါ.. ကြည်ညိုလေးစားတာ အောင့်မထားနိုင်လို့ ပထမဆုံးရေးဖြစ်တဲ့ ကွန်မင့်ပါ.. ကျွန်တော်.. သူများကို စိတ်ထဲမှာ တကယ်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲမရှိပဲ ချီးကျူးရမှာ အင်မတန်ပျင်းတယ်ဗျ..